गुगल अर्थमा यूटीएम निर्देशांक - जिओफुमाडास
घर/कार्टोग्राफी/युटिएम Google धरती समकक्षप्रदर्शनगर्नुहुन्छ
कार्टोग्राफीडाउनलोडहरूगुगल अर्थ / नक्साtopografia
युटिएम Google धरती समकक्षप्रदर्शनगर्नुहुन्छ
Google धरतीमा समन्वयहरू तीन तरिकामा हेर्न सकिन्छ:
डिग्री, मिनेट, सेकेन्ड
डिग्री, र दशमलव मिनेट
UTM निर्देशांक (युनिवर्सल ट्रावर्सो डे मर्जेटर
सैन्य ग्रिड सन्दर्भ प्रणाली
यस आलेखले Google अर्थमा UTM समन्वयको संभालाको बारेमा तीनवटा कुरा बताउँछ:
१. गुगल अर्थमा कसरी यूटीएम निर्देशांकहरू हेर्ने।
२. गुगल अर्थमा कसरी यूटीएम निर्देशांकहरू प्रविष्ट गर्ने
Excel. एक्सेलबाट गुगल धरतीमा कसरी धेरै यूटीएम निर्देशांकहरू प्रविष्ट गर्ने
Many. कसरी धेरै UTM निर्देशांकहरू इनपुट गर्ने, Google नक्सामा उनीहरू प्रदर्शन र Google Earth मा डाउनलोड गर्नुहोस्।
१. गुगल अर्थमा कसरी यूटीएम निर्देशांकहरू हेर्ने
UTM निर्देशांक हेर्नका लागि चयन गर्नुहोस्: उपकरण / विकल्पहरू। छविमा देखाइए झैं, युनिभर्सल ट्राभर्सो डे मर्केटर विकल्प थ्रीडी दृश्य ट्याबमा चयन गरिएको छ।
यसैले डेटा हेर्ने बेला हामी देख्दछौं कि तल त्यहाँ UTM ढाँचामा निर्देशांकहरू छन्। प्रदर्शित समन्वय सूचकको स्थिति बराबर हुन्छ, किनकि यसले स्क्रिनमा यसलाई परिवर्तन गर्दछ।
यस समन्वयको अर्थ हो:
16 यो क्षेत्र हो,
पी चतुर्थार्थी हो,
579,706.89 एम X समन्वय (पूर्वी) हो,
1,341,693.45 एम Y निर्देशांक (Northing) हो,
N यसको अर्थ यो क्षेत्रमा भूमध्य रेखाको उत्तर हो।
निम्न छविले 16 क्षेत्र देखाउँछ र बिन्दु जहाँ उदाहरण समन्वय स्थित छ।
Google धरतीमा UTM क्षेत्रहरूको दृष्टिकरणको सुविधा लिन हामीले हामीले तयार गरेका फाइल तयार गरेका छौं यो लिङ्कबाट डाउनलोड गर्नुहोस्. यो zip को रूपमा संकुचित गरिएको छ, तर जब तपाई यसलाई डिम्प्रेस गर्नुहुन्छ तपाई एक किलोमिटर फाईल देख्नुहुनेछ जुन गुगल अर्थको साथ खोल्न सकिन्छ र तपाईलाई UTM क्षेत्र पहिचान गर्न अनुमति दिनेछ, तलको छविमा देखाइएको जस्तो। अमेरिकी महाद्वीप, स्पेन र पोर्चुगलको UTM क्षेत्रहरू समावेश गर्दछ।
२. गुगल अर्थमा कसरी यूटीएम निर्देशांकहरू प्रविष्ट गर्ने।
यदि हामी चाहन्छौं कि हामी UTM कोष्ठामा प्रवेश गर्न चाहन्छौ, त्यसपछि हामी निम्न मार्गमा गर्छौं:
"स्थिति थप्नुहोस्" उपकरण प्रयोग गरिन्छ। यसले एउटा प्यानल देखाउँछ जहाँ समन्वय UTM ढाँचामा प्रदर्शित हुन्छ। यदि स्थित स्थान तानिएको छ भने, यसले स्वचालित रूपमा समन्वय परिवर्तन गर्दछ। यदि हामीलाई समन्वय थाहा छ भने, हामी यसलाई फारममा मात्र परिमार्जन गर्छौं, क्षेत्र र समन्वयलाई संकेत गर्दै; स्वीकार बटन चयन गर्दा, बिन्दु हामीले संकेत गरेको स्थितिमा अवस्थित हुनेछ।
Google सँग कार्यक्षमता छैन जसमा एकाधिक UTM समन्वयहरू प्रविष्टि गर्न सकिन्छ। तपाईंको प्रश्न निश्चित छ:
जानकारीको लागि धन्यवाद, तर म कसरी समकक्षहरूको सेटमा प्रवेश गर्छु?
Many. Google धरतीमा सिधा एक्सेलबाट धेरै UTM निर्देशांक प्रविष्ट गर्ने विकल्प
यदि हामी चाहानुहुन्छ यदि हामी एक्सेल फाईलमा UTM समकक्षहरूको एक सेट प्रविष्ट गर्न चाहन्छौं, त्यसपछि हामीले अतिरिक्त उपकरणमा सहज गर्न पछाडि पर्नेछ।
यस उपकरणमा तपाइँ प्रविष्ट गर्नुहोस्: भर्टेक्सको नाम, निर्देशांक, क्षेत्र, गोलार्ध र एक वर्णन। सही सेक्सनमा तपाईले पथ थप्नुभयो जहाँ तपाईं फाइल र विवरण बचत गर्नुहुनेछ।
तपाईंले "KML उत्पन्न गर्नुहोस्" बटन थिच्दा, तपाईंले परिभाषित गर्नुभएको मार्गमा फाइल बचत हुनेछ। निम्न ग्राफिकले निर्देशांकहरूको सूची कसरी प्रदर्शित हुन्छ भनेर देखाउँछ। फाइल यसरी देखाइनुपर्छ।
टेम्पलेट डाउनलोड गर्नुहोस्
टेम्प्लेट बिना सीमाहरू प्राप्त गर्न, तपाईं यसको साथ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ
यस लिङ्कमा PayPal वा क्रेडिट कार्ड
एक पटक तपाईंले भुक्तान गर्नुभएपछि तपाईंले डाउनलोड मार्गको संकेत दिनुभएको इमेल प्राप्त गर्नुहुनेछ।
बिन्दुहरूको संख्या तपाईँले कनवर्ट गर्नुहुनेछ 400 बिन्दुहरू।
तपाइँको टेम्पलेट सक्षम गर्नको लागि समर्थनमा लेख्नुहोस्।
यदि तपाईंसँग कुनै अन्य प्रश्नहरू छन् भने, समर्थन ईमेल Editor@geofumadas.com मा लेख्नुहोस्। यो जहिले पनि तपाईंले प्रयोग गरिरहनु भएको विन्डोजको संस्करणलाई संकेत गर्दछ।
भर्चुअल अर्थ अपडेट छविहरू (० Nov नोभेम्बर)
Google मा सार्थक चित्रमा राम्रो रिजोल्युशन छ?
पाब्लो सेबास्टियन भन्छिन्:
मार्च, 2020 बजे
नमस्कार के तपाई मलाई बताउन सक्नुहुन्छ कि यदि त्यहाँ कुनै कार्यक्रम छ जहाँ ग्रीनविच मेरिडियनले यसको स्थान परिवर्तन गर्न सक्छ, उदाहरणका लागि, यो सेनेगल हुँदै जान्छ वा पृथ्वीको कुनै बिन्दुमा?
आउनुहोस्, त्यहाँ धेरै किनारहरू छन्।
१. दिमागमा राख्नुहोस् कि गारामिन नेभिगेटर हुनु भनेको प्रत्येक बिन्दुमा तपाईले and र meters मिटर को बीचमा शुद्धता राख्नु हुन्छ
२. गुगल अर्थ छविहरू स्थितिका लागि प्रमाणित छैनन्। त्यसैले तिनीहरू प्रायः meters० मिटरसम्म विस्थापित हुन्छन्।
You. यदि तपाईं अर्कगिसमा जान लाग्नु भएको छ भने तपाई प्रोग्रामबाट मात्र आयात गर्नुहुन्छ। तपाईको जीपीएस डाटा तपाईले यसलाई गगल अर्थ छविको साथ सार्न सक्नुहुने भन्दा बढी विश्वासयोग्य छ। यदि तपाईं हेर्न चाहनुहुन्छ कि यदि तिनीहरू छविसँग एकरूप छन् भने, यो अर्को स्रोतको साथ हुनुपर्दछ, गुगल पृथ्वीसँग होइन।
नमस्कार, म गर्मिन जीपीएस संग प्राप्त केहि अंक छ तर जब तिनीहरूलाई जान्छ पृथ्वी को केहि मीटर मा जहां उनि फोटो द्वारा हुनु पर्छ माथि स्थित छ, garmin अनुप्रयोगों संग कुनै समस्या छैन।
यो समस्या कसरी जानकारीलाई तर्कलाई पारित गर्न निश्चित छ?
यदि एक्सेलका साथ केडीईएल फाइल खोल्न प्रयास गर्नुहोस् वा तथ्याङ्क सम्पादकको प्रमाणीकरण गर्नका लागि यदि तथ्याङ्कको राउन्डिङ गुगल अर्थमा मात्र दृश्य हो वा यो फाइलमा पनि छ।
यो पनि आवश्यक हुन सक्छ कि त्यो वोन कार्यक्रम द्वारा गरिन सक्छ, जो समन्वयहरुलाई किन्टल सम्म परिवर्तित।
डिएगो विलारोरोल भन्छिन्:
मलाई गुगल अर्थ प्रो संग समस्या छ, यसले जान्छ कि म जीपीएसको सहयोगमा लिने सबै बिन्दुहरू लोड गर्दछु ... प्रत्येक बिन्दुमा निर्देशांकमा दशमलव (UTM प्रणाली) थियो तर फेरि गुगल अर्थ कार्यक्रममा प्रवेश गर्दा यी दशमलवहरू शून्यमा गोलो भयो। म कसरी तिनीहरूलाई फर्काउन सक्छु?
HERNAN TORRES भन्छिन्:
मेरो समस्या गुगल धरती प्रोसँग हो, यसले समकक्ष डिग्री, मिनेट, सेकेन्ड स्वीकार गर्दैन। हरेक पटक मैले उनीहरूलाई परिचय दिन्छु
एक किंवदंती देखिन्छ कि "हामी यो स्थान बुझ्दैनौं", निर्देशांक डिग्री, दशमलव यसमा कुनै समस्या छैन। तपाईंको मद्दतको लागि धन्यवाद।
मैले संकेत गरेँ। गुगल धरतीका तस्वीरहरू पूर्ण स्थितिमा विश्वसनीय छैनन्।
यसको मतलब यो हो कि सापेक्ष तहमा तिनीहरू धेरै राम्रा छन्। मामला जस्तो तपाईले आरटीकेका साथ काम गर्नुभयो, जुन मैले बुझें कि तपाईंले छविमा आधारित स्थिति राख्नु भएको छ। सापेक्ष तहमा यसले तपाइँको लागि काम गर्दछ।
तर एक abosluto स्तर मा, छविहरु सटीक जीपीएस संग लिइएको अंकहरूमा आधारित विश्वसनीय छैन।
म तपाईंलाई यस लेखलाई हेर्छु कि हामी कहाँ देखाउँछौं, ओभरल्यापिंग छविहरूको क्षेत्रमा।
Fredy Javier भन्छिन्:
अभिवादन, तपाईको टिप्पणीका लागि धेरै धन्यबाद, समस्या यो हो कि जब मैले स्थापित आधारसँग सुधार गर्दछु, निर्देशांकहरू परिवर्तन हुन्छन् र त्यो सुधार पछि तिनीहरू छविसँग राम्रो देखिन्छन् यस बाहेक म नियन्त्रण बिन्दु बिना rtk सहित केहि बिन्दु लिन्छु र ती निर्देशांकहरू धेरै राम्रोसँग बाहिर आउँदछन्। तस्विरको बारेमा, म स्थिर अंकहरूमा त्रुटि देख्छु, धन्यवाद
नमस्ते फ्रेडी पक्कै पनि तपाईंको पोइन्टहरू राम्रो छन्; सामान्यतया, गुगल अर्थ छविहरू १ 15 र meters० मिटर बीचमा अफसेट हुन्छन्। तपाईं यसलाई विभिन्न शटहरूबाट छवि बीचको ओभरल्याप क्षेत्रमा जाँच गर्न सक्नुहुनेछ।
हेर्नुहोस् यो उदाहरण
Saludos कृपया एउटा मुद्दा Q टिप्पणी मलाई प्रस्तुत छ एक जीपीएस grx2 sokkia जब म दुई नियन्त्रण अंक स्थिर तरिका राख्न म पोस्ट-प्रक्रिया के र Google eart अंक 10 देखि विस्थापित मलाई तस्बिरहरू आदर मीटर 20 गर्न छोड्न आय समकक्षप्रदर्शनगर्नुहुन्छ छ यो खराब छ वा जीपीएस भइरहेको छ तपाईंको कमेन्ट मूल्यांकन भने गुगल को थाहा छैन।
राम्रो म कसैलाई जब म दुई अंक स्थिर नियन्त्रण राख्न र छवि विस्थापन हिँड्छ म आदर विस्थापित अंक प्राप्त गुगल eart गर्न पोस्ट-प्रक्रिया को निर्देशांक प्रविष्ट गरेर पोस्ट-प्रक्रिया बनाउन चाहनुहुन्छ मलाई जीपीएस grx2 sokkia बारेमा आफ्नो टिप्पणी दिन सक्छन् भने चाहनुहुन्छ लगभग 19 देखि 20 त्रुटि मीटर सम्म
र यदि तिनीहरू त्यस क्षेत्रबाट होइनन्, कुन क्षेत्रमा तपाइँ तिनीहरूलाई बदल्न चाहानुहुन्छ?
कृपया यदि कसैले मलाई मद्दत गर्न सक्दछ भने मसँग २२ 22499.84 8001.61.. n पूर्व र ing००१.17१ को पूर्व निर्देशांकहरू छन्, यी निर्देशांकहरू पाइजोमिटरसँग मिल्दछन्। यी जोन १ S एस - पेरुको अनुरूप होईन, तर यो त्यस्तो छैन जुन मैले तिनीहरूलाई परिवर्तन गरेको ठाउँमा परिवर्तन गर्न
Gerardo Rojas Sayago भन्छिन्:
शुभ साँझ मैले कदर गर्दछु कसले मलाई मद्दत गर्न सक्छन, मसँग दुई अंकहरू छन् जुन मैले गार्मीन जीपीएसबाट प्राप्त गरें: 975815१ and र १२1241977१ 975044 .1241754 अन्य बुँदा 19 2000०71.0775079167 र १२ 4.5962004167 हो, म कसरी प्रविष्ट गर्न सक्छु र गूगल पृथ्वीमा समन्वयित दृष्टिकोणहरू गुगल अर्थमा कसरी हुन्छ भन्न सक्दछु। क्षेत्र पनामा डे अरौका कोलम्बिया जोन १ N एन गुगल अर्थमा बाहिर आउँदछ म ट्रान्सभर्स मर्काटो डाटाम सिर्गस २००० प्रक्षेपण र सेन्ट्रल मेरिडियानो प्यारामिटरहरूसहित: -1000000१.०1000000०XNUMX१XNUMX lat अक्षांश XNUMX XNUMX XNUMX२XNUMX००१XNUMX, पूर्व १००००००० उत्तर १००००००
म सराहना गर्न सक्छु जो कसले उदाहरण दिईन्छ कि म कसरी तिनीहरुलाई गुगल अर्थमा प्रतिनिधित्व गर्न सक्छु वा मलाई विधिका बारे बताउन सक्छ वा गुगल निर्देशांकमा मलाई दिन सक्छ। म कृतज्ञ हुनेछु
यो Google Earth को डेस्कटप संस्करणको शीर्ष पट्टीमा प्रतिमा हो।
यस लेखले एउटा उदाहरण देखाउँछ
जुआन अलबर्टो जुम्बानोलो भन्छिन्:
बधाईहरु कसरि म axseder सालों को उपग्रह छ साल पहिले गूगल धरती मा कसरि गर्न सक्छ।
anteman बाट धन्यवाद!
विकल्प मेरो म्याकमा देखा पर्दैन
जाभियर पेन्ज भन्छिन्:
म सोच्छु कि मैले पहिले नै फेला पारेको छु, म एनएनएनबाट 81
Enrique Rabajille भन्छिन्:
राम्रो दिउँसो, म तिमी मलाई मदत गर्न सक्छ भने म चाहन्छु समस्या, म Google धरती निर्देशांक देखि लिएका छन् (म हो कि 84 WGS बुझे) र म psad 56 म सिफारिस, तिनीहरूले कृतज्ञ छौं भनेर परिवर्तन गर्न आवश्यक छ।
Erika Yojana Morales भन्छिन्:
राम्रो दिउँसो निर्यात KML संग, eart नागरिक 3d छ आवश्यक छ गूगल एक DWG खर्च गर्न नै KMZ Google eart, ऊ डाउनलोड कार्यक्रम नक्सा नक्साङ्कन गर्नेहरूसँग वैश्विक ह्याण्डल कि ढाँचा छ, बस फाइल DWG आदेश घुसाउनुहोस्।
मसँग एउटा प्रश्न छ किनकि यदि मेरो ठाँउको फ्ल्याट निर्देशांकहरू १०eई र n n एन छन् भने गुगल ईरिटमा तीe104 ई 95 at मा देखा पर्दछन् ... म यसलाई बुझ्न सक्दिन। म कोलम्बियामा फाईल रूपान्तरण गर्न चाहान्छु र यसले सँधै मलाई अरू कतै फाँसी दिन्छ र म दुबै फाइलहरू कन्फिगर गर्छु जुन गुगल ईटमा त्रुटि हुन सक्छ ..
तपाईंले उल्लेख गरिरहनु भएको निर्देशांकहरू विश्वमा अद्वितीय छैनन्। तिनीहरू उत्तरी गोलार्धमा times० पटक र दक्षिणी गोलार्धमा times० पटक, प्रत्येक पटक यूटीएम क्षेत्रका लागि २ पटक पुनर्मिलन गरिन्छ।
उनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्न सक्षम हुनाले, तपाईं क्षेत्रको बारेमा जान्दछन्, उनीहरूले भौगोलिक रूपमा होइन तर अनुमानित छन्।
लुइस ट्यापिया भन्छिन्:
नमस्ते कसैले मलाई सहयोग गर्न सक्छ समकक्षहरूलाई फ्ल्यागमा भौगोलिक रूपमा
उदाहरणका लागि म: 836631 एक्स
मलाई गुगल अर्थमा पत्ता लगाउन आवश्यक छ
तर कुनै जीपीएस तपाईले प्रयोग गर्नुहुने जीपीएस वास्तविक समयमा काम गर्दैन किनभने तपाईले तपाइँको दावीमा सही स्थान दिनुहुन्न र तपाईसँग 15 मिटरको अनुमानित त्रुटि हुनेछ
नमस्ते म यो नयाँ, म सिर्फ प्रयोग गर्न सुरु छु, विद्युत डिजाइनर हूँ स्टार्टर्स लागि राम्रो छु, र हामी मध्यम भोल्टेज लाइनको स्थापना मा काम मा हो, वितरक शक्ति लाइन हाम्रो लागि आफ्नो जडान बिन्दु मलाई भन्छ सम्पर्क हामी जडान युटिएम मा स्थित एक पोल, समकक्षप्रदर्शनगर्नुहुन्छ छ उत्तर 6183487, 288753 यो आगमन WGS84, H18, राम्रो तरिकाले मलाई कसरी नक्सामा हेर्नुहोस्, चिली देखि सलाम पुग्न Google धरती मा यो डेटा प्रविष्ट गर्न थाहा दिनुहोस्।
यन्त्र मोडेलमा निर्भर गर्दछ।
यदि तपाईं eTrex प्रकार ब्राउजरको सन्दर्भ गर्दै हुनुहुन्छ, सटीकता3को6मिटरको त्रिज्या भित्र छ।
अन्य Garmin उपकरण अधिक सही छ।
फ्रान्सिस्को Aguilar भन्छिन्:
यी Garmi जीपीएससँग लिइएको यी UTM समन्वयहरू विश्वसनीय छन् वा राम्रो भनिएको छ भने त्यहाँ GPS ले के प्रदान गर्दछ भन्ने विश्वसनीय अनुमान छ।
बेई रेसोस रोड्रिगो मार्लिन भन्छिन्:
यो एक धेरै रोचक विषय हो र यो धेरै उपयोगी छ
यसले कुनै पनि ब्राउजर (जीपीएस) सेवा गर्दछ, विशेष गरी म गारिन चाहन्छु
म जान्न चाहन्छु कि भौतिक भू-भागमा कुन उपकरणले utm लाई संकेत गर्दछ कि म एक विशिष्ट साजिश र बहुभुज को क्याडिस्ट्रेमा छ।
यो निर्धारण गर्न सजिलो छैन।
यो केही देशहरूमा देख्न सकिन्छ, जहाँ राज्य ले छविहरू Google लाई प्रदान गर्दछ, जुन मेल खान्छ।
जोस जी भन्छिन्:
यदि गोपाल छविहरू विस्थापित भएमा वर्णन गर्न सक्दछन्, जानबूझो गरीएको हो वा यसलाई ठीक गर्न एक तरिका हो?
गुगल अर्थले WGS84 को डेटा को रूपमा प्रयोग गर्दछ।
तपाईंको डेटासँग मेल खानको लागि तपाईंले अटोक्याडमा एउटै डेटामसँग काम गर्नुपर्छ।
गुगल अर्थ छविहरू पनि विस्थापित छन्, त्यसैले यदि समन्वय समान छ भने, तपाईं विस्थापन पाउनुहुनेछ। यद्यपि तपाईंले निर्दिष्ट दूरी पक्कै पनि हो किनकि तपाईं अर्को डाटाम प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ।
नमस्ते साझेदारहरू! म तपाईलाई मूर्ख लाग्न सक्ने प्रश्न गर्न चाहन्छु। Autocad मा मैले "GeoRefImg" नामक प्लगइन प्रयोग गरी एउटा छवि (jgp) लाई भू-सन्दर्भित गर्छु, राम्रोसँग, जब छवि अटोक्याड स्पेस भित्र राम्रोसँग अवस्थित हुन्छ, म अनियमित बिन्दु लिन्छु र समन्वयहरू (x,y) तयार गर्छु र त्यसपछि म' m गुगल अर्थमा जाँदै छ र यी निर्देशांकहरू UTM मोडमा प्रविष्ट गर्नुहोस् तर यसले 150 र 200m बीचको भिन्नताहरूसँग सही ठाउँमा बिन्दु राख्दैन। जसको कारण हुन सक्छ? अटोक्याडले प्रयोग गरेको डाटाम गुगल अर्थ जस्तै होइन? वा यो केवल गुगल अर्थ बग हो?
Google अर्थसँग त्यस्तो प्रकारको प्रतिकृति छैन।
तपाईं यसलाई GIS कार्यक्रमको साथ उत्पन्न गर्न र यसलाई KML मा निर्यात गर्नु पर्छ।
जानले यो लेख वर्णन गर्दछ कि यसलाई कसरी मनिफोल्ड जीआईएसको साथ उत्पन्न गर्न सकिन्छ, तर डिग्रीको आधारमा ग्रिड सिर्जना गर्नुको सट्टा, तपाईं मीटरको दूरीमा आधारित यो गर्नुहुन्छ। त्यसपछि georeferences र किलोमिटर निर्यात
मैले Google Earth मा UTM मा समन्वयित ग्रिड राखेको छु, तर मलाई चाहिन्छ कि ग्रिड किलोमिटर हो, किनकी म यसलाई पृथ्वी अभिविन्यासका लागि प्रयोग गर्न चाहन्छु। बाहिर आएको ग्रिडले मेरो लागि काम गर्दैन। यो गर्न सकिन्छ वा के मैले अन्य माध्यमहरू खोज्न चाहन्छु? क्यू मलाई सिफारिस गर्दछु?
पहिलो, गुगल अर्थ WGS84 प्रयोग गर्दछ।
त्यसो भए तपाईले यो याद गर्नुपर्दछ कि गुगल छविहरूमा विस्थापन छ, एक समान होइन र तपाईं ती जोडीहरूमा जाँच गर्न सक्नुहुनेछ जुन तिनीहरू बीचमा अवस्थित छ। यसको परीक्षण गर्नका लागि अर्को तरिका भवन बनाउनु हो, त्यसपछि अर्को वर्षको लेयर ईतिहासको साथ सक्रिय गर्नुहोस् जुन गुगलसँग छ र तपाईंले देख्नुहुनेछ कि उनीहरू मेल खाँदैनन्।
नमस्ते, म लुगाको लागि माफी चाहता छु तर म पागल हुँदैछु, मेरो कारबागोग्राफीको बारेमा धेरै विचार छैन र म मृत अन्त्य सडकमा छु।
मैले Google नक्सामा केही बस स्टपहरू भूगोल गर्न खोज्छु। म युटिएम मा निर्देशांक छ, तर म प्रयोग ellipsoid थाहा मिल्यो छैन। स्पेनका मामला मा, म ED50 र ETRS89 प्रयास गर्नुभयो, तर तपाईं निर्देशांक देशान्तर / अक्षांश रूपान्तरण गर्दा, अफसेट स्टप धेरै ठूलो कम्तिमा 100 मीटर भने बढि छ। के यो सही डेटम प्रयोग गरिरहनु भएको छ? के Google नक्शा असफलता छ? के यो धैर्य सुधार गर्न कुनै तरिका छ?
धन्यवाद र आशा छ कि तपाईं मलाई कहाँ पछ्याउनको केहि संकेत दिन सक्नुहुन्छ
म अनुभवहीन छु, म कसरी निर्यात गर्न सक्नुहुन्छ समकक्षप्रदर्शनगर्नुहुन्छ मेरी Excel जीपीएस GARMIN 60C एक ?? र MapSource मार्ग विन्दुहरू मा र Google धरती उभिरहेका थिए तर म प्रतिलिपि रूपमा ?? मदत गर्नुहोस्
नमस्ते पाब्लो, असुविधाको लागी खेद छ।
हामीले टेम्पलेट तपाईंको इमेलमा पठाएका छौं।
पाब्लो क्रुज भन्छिन्:
मसँग UTM लाई भूगोलिकाहरू परिवर्तन गर्न एक्सेल टेम्प्लेटको साथ एउटा समस्या छ
मैले पे पालसँग भुक्तान गरेको छु र जब मैले लिङ्क खोल्छु कि उनि मेरो इमेलमा पठाउँछु मैले त्रुटि प्राप्त गर्दछु
तपाईं सक्नुहुन्न, AutoCAD मा तपाई मात्र UTM WGS84 प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ
जस्तै मैले उत्तर समकक्ष समन्वय र UTM PSAD 56 मा देख्छु
तपाईंले उल्लेख गर्नुभएको आवेदन अवधि पहिले नै समयावधि समाप्त भएको थियो।
एक विकल्प को Digipoints को उपयोग गर्न को लागि छ, यो अनलाइन काम गर्दछ, तपाईं गुगल धरती मा देखने को लागि utm निर्देशित र फिर kml मा निर्यात गर्न सक्छन्
नमस्कार, माफ, म पृष्ठ म अन्तिम अद्यावधिक गर्नुहोस्, 2007-08 थियो हाल हेर्न पढेको र कि युटिएम निर्देशांक Google पृथ्वीमा एक्सेल पारित recomendabas आवेदन lowering प्रयास गर्नुहोस्, तर म कहिल्यै PQ कार्यक्रम सधैँ qeu म्याद समाप्त भएको थियो लाग्यो स्थापना सक्छ, त्यहाँ युटिएम पत्ता लगाउन र देशमा Google धरती समकक्षमाटेलिस्कोपलक्षितसमकक्षसेटगर्नुहोस्? प्राप्त गर्न केही नयाँ आवेदन छन्। म सबै डोऱ्याइको लागि असीमित धन्यवाद।
तपाईंले भौगोलिक समन्वयमा UTM समन्वयहरू कन्फिगर गर्नुपर्दछ।
यसको लागि, म तपाईंलाई अनुशंसा गर्दछ कि eQuery, एक अनलाइन उपकरण जो तपाईंलाई UTM बिंदुहरु को भौगोलिक बिंदुहरुमा सूची बदलन को लागि अनुमति दि्छ।
त्यसपछि Google धरतीमा तपाईंले दर्शकमा तिनीहरूलाई लेखेर वा txt फाईल खोलेर ती समन्वयहरू हेर्न सक्नुहुन्छ
नमस्ते "g", जानकारी धेरै चाखलाग्दो छ, यद्यपि मसँग UTM "X" "Y" को निर्देशांकहरू छन् र मलाई पृथ्वीमा नक्सा कसरी पत्ता लगाउने भन्ने थाहा छैन वा थाहा छैन भन्ने स्थितिमा म आफैंलाई फेला पार्छु, यदि म प्रशंसा गर्नेछु। तिमिले मलाई मद्धत गर्न सक्छौ
मलाई गुगल पोल्टमा प्लेन बहुभुजहरू हस्तान्तरण गर्न आवश्यक छ कृपया मलाई जानकारी दिनुहोस्
नमस्ते आना, त्यहाँ तपाईले चाहानु भएको प्रोग्रामहरू छन्, जसलाई प्राय जसो जिओकोडिod भनिन्छ। तर सामान्यतया यो ठेगानाहरूको संरचनामा निर्भर हुन्छ।
यदि तपाइँ हामीलाई केही उदाहरणहरू देखाउनुहुन्छ भने, हामी यसलाई हेर्न सक्छौं।
Hola¡ मलाई निर्देशांक (एक्स, वाई) गर्न ठेगाना रूपान्तरण चासो र म Google धरती गरेको मलाई प्रदान सक्ने टिप्पणी गर्नुभयो। मलाई केहि निश्चित क्षेत्रमा ट्याप गर्नु पर्ने ग्राहकहरूको सूची पूरै आवश्यक छ। कार्यक्रम जहाँ तपाईं Mapinfo अपलोड हुनेछ, Google धरती यदि म जानकारी प्राप्त जान्नु आवश्यक वा छ भने मात्र म ठेगाना छ भने मलाई, एक स्थान को निर्देशांक दिन सक्छ कि कुनै पनि कनवर्टर छ।
मलाई आशा छ तपाईंले मलाई राम्रोसँग व्याख्या गर्नुभएको छ। र मलाई आशा छ कि तपाईं मलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ।
यो फरक हुनु सामान्य हो। गुगल अर्थ डिजिटल मोडल एकदम सरलीकृत छ, र यसलाई त्रिकोणीय र टाइलिंगको बीचमा AutoCAD मा रूपान्तरण गर्दा त्यहाँ पोइन्टहरू छन् जुन औसत उचाइबाट बनाइन्छ।
एक समस्या छ, यो नागरिक अटोक्याड एड 2010 छवि र Google पृथ्वी सतह निर्यात गर्दा elevations सतह र Google धरती देखाएको अटोक्याड मा उचाइमा बीच छ बेग्लाबेग्लै छ। म यो समस्या कसरी समाधान गर्न सक्छु?
निश्चित रूपमा तपाइँले बहुभुज georeferencing पत्ता लगाउन, कम से कम दुई क्षेत्र बिन्दुहरू कब्जा गर्नुहुन्छ।
पहिलो UTM बिन्दुमा तपाईलाई कहाँ जानुहुन्छ बिन्दुमा तपाईले घुमाउन सक्नुहुन्छ किनकि तपाईंको विमानको दिशा सम्भवतः चुम्बकीय र गैर-भौगोलिक उत्तरमा सम्बन्धित छ।
यदि त्यो औपचारिक कामको लागि हो भने, तपाईंको जीपीएस धेरै उपयोगी हुने छैन किनकि प्रत्येक बिन्दुमा रेडियल प्रेसिजन3देखि meters मिटर सम्म हुन्छ। तपाईको बहुभुज ठाउँ मा कम वा कम, र केहि घुमाई संग हुनेछ, तर कम्तिमा तपाई यसलाई यसलाई गुगल अर्थ मा प्रदर्शित भएको नजिक देख्न सक्षम हुनुहुनेछ।
गुगल अर्थ छविहरू जियोरेन्फरका लागि उपयोगी छैनन् किनकि तिनीहरूसँग सामान्यतया विस्थापन हुन्छ। त्यसैले तपाईंको जीपीएस मापन अधिक विश्वसनीय छ।
Ciro El Bagual भन्छिन्:
माफ गर्नुहोस्, म आफैंलाई अझ राम्रोसँग व्याख्या गर्छु, (यसको लागि म काठले बनेको हुँ, मलाई थोरै थाहा छ ट्रायल र एरर हो)। मसँग नक्सा छ र म यसलाई गुगल अर्थबाट पत्ता लगाउन चाहन्छु। योजनामा ​​लेखिएको डेटामा यी जस्ता सन्दर्भहरू छन्, प्रत्येक रेखामा एउटा सन्दर्भ लेखिएको छ (अहिले मसँग योजनाहरू छैन) जसले उदाहरणका लागि भन्छ: SW 55°43'24” 1.245m, र त्यसरी नै प्रत्येक लाइनमा। मेरो समस्या यो हो कि मसँग यो कहाँ छ भन्ने अस्पष्ट विचार छ, तर बहुभुजको बिन्दुहरू कहाँ छन् भन्ने कुरा होइन। म यसलाई गुगलमा पत्ता लगाउन चाहन्छु, किनकि मलाई क्षेत्र थाहा छ (त्यहाँ लगभग 2500 हेक्टर छन्)। तर मसँग कुनै सुरूवात बिन्दु छैन, शीर्षकमा पनि छैन।
के म त्यस नक्शाको साथ नक्सामा त्यो सतह पत्ता लगाउन सक्छु? या केवल एक सुरूवात बिन्दु भएको छ?
के म यो Google धरतीमा मार्गमा लोन रेखाहरू गर्न सक्छु? पहुँच सडकहरूको सही सन्दर्भहरू छन्?
के म पाठ्यक्रमहरूको सम्बन्धित चौथोमा UTM हरू निर्धारित गर्न सक्छु?
तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद, र अन्य जानकारीको कमीको लागि क्षमा गर्नुहोला, तर फेरि मलाई विषयको बारेमा धेरै बुझ्दैन। मलाई एक गार्मिन विस्टा जीपीएस छ।
सीरो भेनिगो - निर्माता।
त्यसो भए, यदि उनी निर्देशनहरू छन् भने, त्यसपछि मूलको रूपमा कुनै पनि बिन्दु राख्नुहोस्, र त्यसपछि तपाइँ फारम राख्नुहुन्छ:
कुनै पनि समयमा क्लिक गर्नुहोस्
म जान्न चाहन्छु कि म बियरिङको दूरीको मात्र डाटा भएको बहुभुज फेला पार्न सक्छु, उदाहरणका लागि NW 35° 25′ 33″ CO 1200 m... र अन्य डाटासँग। मैले फेला पार्नु भएको समस्या यो हो कि मसँग सुरूवात बिन्दु छैन र म सामान्यतया विश्वास गर्छु कि तिनीहरू UTM वा ° 'र” हुन् तर उदाहरणका लागि: N 65° 34' 27″।
म विमान को संदर्भ मा छ कि सबै केहि डेटा संग SW एस या केहि ... धन्यवाद ...
तपाई के कार्यक्रम छ?
यदि तपाईसँग रहेको छ AutoCAD, तपाईले के गर्नु पर्छ:
त्यसपछि तपाइँ फारम XXXx को पहिलो समन्वय लेख्नुहोस्, yyyy
तपाइँ निम्न निर्देशांक XXXx, yyyy लेख्नुहोस्
र तपाईंको बहुभुज कसरी निर्माण गरिनेछ भनेर
को रूप मा म एक, बहुभुज को परियोजना को रूप मा, म utm निर्देशांक छ, तर म यसलाई प्रोजेक्ट नहीं गरेर सकता, यो डिग्री को लागि पूछताछ र मेरो केवल ऊर्ध्वा को utm निर्देशकहरु छ, मलाई आशा छ कि तपाईं मेरी मदद गर्न सक्छन्
कृपया, म कसरी गुगल डाउनलोड गर्छु मेरो शहरको यूटीएम निर्देशांकहरू लिन ...
नमस्ते म एक नागरिक बक्स को वोट गर्न को लागी को आवश्यकता हो जो बहुभुज या संरेखण को समन्वय को संकेत गर्दछ
नमस्ते, म एक्सेल म्याक्रो epoint2ge को प्रयोग गर्न कोसिस गर्दै छु तर यसले मलाई बताउँछ कि बीटा पहिले नै समयावधि समाप्त भएको छ कि तपाईंले पृष्ठबाट अर्को संस्करण पाउनु पर्छ, अब पृष्ठमा 2.0 संस्करण उपलब्ध छैन।
हेलो, मलाई थाहा छैन कि तपाईले मलाई मद्दत गर्न सक्नु भएको छ कि म एक काम गर्दैछु र मलाई नक्सामा नमूना प्वाइन्टहरू राख्नु पर्छ र जीपीएसको साथमा मैले मिनेट, सेकेन्डमा समन्वय गरेको छु। अब कसरी यी निर्देशकहरूलाई Google धरती वा प्रोग्राम मलाई पठाउने? तपाईंलाई सिफारिस गर्दछु
नमस्ते, हुनसक्छ यहाँ मेरो प्रश्न हेर्न को लागी, तर मलाई आशा छ कि तपाईं मलाई मद्दत गर्न सक्नुहुनेछ। मलाई थाहा छ कि म PSAD 56 मा WGS84 मा UTM को समन्वयहरुलाई कसरि कन्वर्ट गर्दछ, किनकि मैले पहिले दमित मा समन्वय गरेको छ र म Google धरती मा उनको कल्पना गर्न चाहते हो कि अन्यथा अन्य डेटा को उपयोग गर्दछ।
म छविहरूलाई छुट्टै हेर्न चाहन्छु किनकि म विश्वमा तीन ठाउँका तीन फोटोहरू छुट्टै देख्न चाहन्छु र तिनीहरूका निर्देशांकहरू म तस्बिरको रूपमा छुट्टिएको खराब छवि देख्न सक्दैनन् किनभने उनीहरूले मलाई मद्दत गरे कि म एरेक्विपा पेरूको स्थलाकृतिको विद्यार्थी हुँ।
jose melvi fiallo font भन्छिन्:
शुभ दिन।! म भेनेजुयलाको बोलिभेरियन विश्वविद्यालयको PFG वातावरणीय व्यवस्थापनको विद्यार्थी हुँ। गुगल ईरहट कुनै पनि साइट पत्ता लगाउन राम्रो प्रोग्राम हो, तर यो अपडेट हुन आवश्यक पर्दछ, यस ग्रहमा भइरहेको परिवर्तन र संशोधनहरूको कारण। छविहरू देखा पर्दछन् धेरै सहयोगी छन् तर यो वर्तमान समयको साथ जान्छ। यो नदाहरूसँग हुन्छ जुन गम्भीर परिवर्तन भइरहेको छ। यो केवल एउटा सुझाव हो धन्यवाद ..!
ठीक छ, म खुशी छु ... र प्राविधिक हन्चको संसारमा स्वागत छ
ARQ। GUSTAVO FERNANDEZ भन्छिन्:
परीक्षण लिनुहोस् Terramodel TRIMBLE कनवर्टर 27 भयो छन् NAD गर्न nad83 को प्रणाली र converti समन्वय र herror सीमा 35mts को एक पक्ष छ र 50mts को सीमा पार यो तपाईं लोड गर्न पूर्व को स्थान सुधार ल्याउँछ। मेरो कार्यक्रम र म geoid wgs84 स्वीकार सबै मार्फत। यो ल्याउँछ भने तर मलाई यो चयन दिनु हुनेछ।
सारांश खाताहरूले तपाईले मलाई धन्यवाद दिनुभएको छ।
कम्पनी मा म हामी मात्र कुल स्टेशन काम, र कहिले काँही काम गर्दा ग्राहक हामीलाई जीपीएस संग गरेको एक स्थलाकृतिक सर्वेक्षण दिन्छ र यो मामला मा पूर्ण टोपोग्राफिक जानकारी आउन छैन, म मतलब यो nad27 वा त्यो revizarlo गर्न भने। यो व्यक्तिगत अध्ययनको उद्देश्य हो र गुगलको समझको लागि हो। प्रश्नमा सम्पत्तिमा पहिले नै नियन्त्रण बूथ राखिएको छ। केवल कि तिनीहरूले हराएको थियो हामीले हामीलाई थाहा छ कि उनीहरूले यी utm coordinates कहाँ भेट्टाए।
सच छ कि म गुगल र अन्य प्लगइनहरूको सम्भावना अन्वेषण जारी राख्छु र यो साँच्चै माया गर्छु। म तपाईंको द्रुत प्रतिक्रियाको लागि धन्यवाद। म भाग लिन जारी राख्छु।
किनकि सटीक कुरा तपाईंको जीपीएस हो, गुगलको तस्वीरहरु प्रायः एक निष्पक्ष छ जुन 30 मिटर भन्दा बढि जान्छ।
आफ्नो मामला मलाई राम्रो 200 मीटर prarece, यो उनि उदाहरण nad27 र Google को उन को लागि, अर्को तिथि संग उठाएको थिए हुन सक्छ wgs84
सलाम र धेरै प्रक्रिया को लागि, धन्यवाद र सम्पत्ति को एक बहुभुजको राख्दै मा सफल रोचक थियो, तर त्यहाँ पक्कै छ: ​​कसरी सही गरेको छ, Ami म बाहिर एक चरण पारी 200 मीटर दक्षिण आए? अब म Terramodel मा अंक परिमार्जन गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि यो देखिन्छ तर के भइरहेको छ छैन सार्न? यो धेरै सटीक गुगल हुनेछ वा जीपीएस जसको तिनीहरूले तिनीहरूले सर्वेक्षण गरेन त्यहि प्रिस्सी छैन?
मलाई निर्देशन दिँदै धन्यवाद, म गूगल र यसको उपयोगिता संग सिविल 3d संग पूरा हुदै छु।
IMPORTO 3D एक नागर र वास्तविक Prendo आकृति मा छवि Google धरती सतह क्षेत्रमा लिफ्टहरु प्रणाली देखिन्छ गुगल देखेकै रूप मलाई नै छ। गोलमा समुद्र को स्तर मा उपन्यासहरु को बारे मा ईश्वर को अनुमोदन गर्दछ। प्रश्न:
तपाईं कसरी जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईं एक मात्र ईलेन प्रणालीमा देख्नुहुनेछ कि तपाईं GOOGLE मा भेट्नुहुन्छ?
तपाईलाई धन्यवाद दिनुहुन्छ।
खैर, छोटो रेखाहरूमा एक व्याख्या गर्नुहोस्:
यो उपकरण संग गरिन्छ Excel2GoogleEarth
१. तपाईंसँग निर्देशांक हुनुपर्दछ, अवश्य पनि, जुन उदाहरणका लागि X = 1१.667431.34 Y = १1774223.09२XNUMX.०XNUMX हुन सक्छ
२. तपाईं तिनीहरूलाई एक्सेल फाइलमा प्रविष्ट गर्नुहोस्, अलग स्तम्भहरूमा (तिनीहरू धेरै हुन सक्छन्)।
3 कार्यक्रम सक्रिय गर्नुहोस्
4 त्यहाँ तपाई क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुहुन्छ जहाँ यी समकक्षहरू छन्, र अक्षांश (यदि उत्तर वा दक्षिण हो)
5. "डेटा" को दायाँको बटनमा तपाईले एक्सेल पानाको कक्षहरू चयन गर्नुहुन्छ जहाँ तपाईसँग समन्वयहरू छन्।
6 यदि तपाई पहिलो हो भने, अर्डरलाई संकेत गर्नुहोस्, त्यसपछि तपाइँ पूर्वी र नन्दै भन्नुहुन्छ
7। त्यसपछि तपाईँले संकेत गर्नुहुन्छ कि तपाईं kml फाईल भण्डारण गर्न चाहानुहुन्छ
The. ठीक बटन थिचेर, फाइल सिर्जना हुन्छ।
यो Google धरतीबाट हेर्नको लागी, तपाईंले फाइल गरिरहनु भएको छ, यो kml फाइलको लागि हेर्नु हुन्छ।
हेलो, म कसरी GOOGLE पृथ्वीमा UTM समन्वयहरूमा पोस्टहरू भेट्न चाहन्छु
नमस्ते रिची यो लिङ्क यसको लागि एक उपकरण प्रयोग गर्न एक पोष्ट समर्पित छ।
यदि तपाईंलाई देख्न पछि तपाईले मलाई बताउनुहुन्छ।
हेलो, म मेडोलोलोजी को विस्तार गर्न चाहूँगा, यो GOOGLE पृथ्वी मा UTM को समन्वय मा निभाई जान सक्छ
तपाईंको जवाफको लागि
मैले एक अनुप्रयोग देखेको छैन कि, त्यहाँ एक हो जसले तिनीहरूलाई Google नक्सामा देखाउँदछ, यस पोस्टमा मैले यसको बारेमा कुरा गर्दछु
म Google धरतीबाट कसरी स्तर घटाउँछ?
मैले यो जाँच गरेँ, तर मलाई स्क्रिनमा जानकारी दिने, म यसलाई निर्यात गर्न सक्दिन CAD वा एक्सेलमा, र आयोमको जानकारी अझै निर्यात गर्न सकिँदैन।
कुनै पनि अवस्थामा, म तपाईले मलाई चिन्ह लगाउनुभएका अन्य उपकरणहरूको साथमा समर्थन गर्दछु, किनकि तिनीहरू निस्सन्देह अर्को पटक मेरो लागि धेरै उपयोगी हुनेछ।
म त्यहाँ पनि केहि अन्य जानकारी खोज्दै रहनेछु।
मलाई थाहा छ कि Autodesk को सिविल सफ्टवेयर 3D 2008, Google धरती छवि को असली स्तर घटते र मोडेल संग यस मा परियोजना को लागि एक सतह को सतह देखि प्राप्त गर्न को लागि अनुमति दि्छ।
हो, अब मैले बुझें, मलाई लाग्छ कि हेवाटसट् सेवा प्रयोग गर्नु तपाईको लागि उत्तम हुन्छ, केवल यो गुगल गुगलमा चलाउँदैन तर गुगल नक्शामा चलाएर हेर्नुहोस्, प्रयास गर्नुहोस् ... यदि मैले अर्को तरिकाले अनुसन्धान गरेँ भने
यहाँ हजुरआमाको जानकारी हो
म व्याख्या गर्दछु। म Google धरतीको सतहमा कुनै पनि मार्ग ट्रेस गर्दछु। म यसलाई * .kml को रूपमा बचत गर्दछु, तर मार्ग निर्देशांक प्राप्त गर्न संकेतित प्रोग्रामहरूसँग यो परिवर्तन गर्दा यी भौगोलिक निर्देशांक (अक्षांश, देशान्तर) र0मा देखा पर्दछ। मलाई आवश्यक छ कि Google धरती द्वारा स्क्रिनमा देखाइएको आयामहरूको साथमा कम्तिमा फाईल ल्याउँदा मैले छविमा पोइटर चलाउछु।
यदि तपाइँ आफैंलाई मद्दत गर्न सक्षम हुन व्याख्या गर्नुभयो भने हेर्न। तपाईंसँग यो कार्यक्रमको डाटा छ जुन तपाईंसँग यो छ? तपाईंसँग आयामहरू कसरी छन्? यो गुगल अर्थ स्क्रिनमा छ वा तपाईंले अर्को तरिकामा पाउनुभयो?
मलाई चेतावनी दिनुहोस्
धन्यवाद, तर निर्यात गरिएका बिन्दुहरू भौगोलिक समन्वयमा छन् (अक्षांश, देशान्तरण) र आयाम देखा पर्दैन। जुन मलाई के महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिन्छ।
एक्सेलसँग समान हुन्छ, जहाँ0आयामको साथमा केवल फ्लैट अंकहरू देखा पर्दछ।
खैर, किमिल फाइल बनाउन पहिलो कुरा हो, यसका लागि तपाईंले यो कार्यक्रममा उपकरणहरू, वा बिन्दुहरू वा मार्गहरूको रूपमा गर्न सक्नुहुन्छ।
त्यसपछि यसलाई एक किलोमिटर फाइलको रूपमा बचत गर्नुहोस्
समन्वयहरु डाउनलोड गर्न को लागि तपाईं यसलाई kml देखि एक्सेल, ओटोकड, आर्भिभिड या जीपीएस मा परिवर्तित गर्न सक्नुहुन्छ
यस पोस्टमा मैले केही अनुप्रयोगहरू देखाउँछु कि यो
म Google धरतीबाट कसरी एक यात्राको समन्वयमा डाउनलोड गर्न सक्दिन कि मैले स्क्रीनमा पछ्याएको छु?
नमस्ते सारा, म तपाईंलाई सल्लाह दिन्छु
तपाईं एक्सेलमा utm डेटा प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ, र त्यसोभए कार्यक्रमले तपाईंलाई एक किलोमिटर फाइल सिर्जना गर्दछ।
म तपाईंलाई चेतावनी दिन्छु कि यो म्याक्रो सुरक्षा एक्सेलमा उच्च छ भने यसले तपाईलाई समस्या दिन सक्दछ, यसको लागि तपाइँ उपकरणहरू, विकल्पहरू, सुरक्षा, म्याक्रो सुरक्षामा जानुहोस् र यसलाई निम्नतममा राख्नुहोस्।
त्यसपछि एक्सेल फाइल बचत गर्नुहोस्, बाहिर निस्कनुहोस् र पुन: इन्टर गर्नुहोस्
Sarahi Pacheco भन्छिन्:
मैले गुगल अर्थमा केहि समन्वयहरू चिन्ह लगाउन जरुरी छ जसको जीवजन्तु नमूनाकरण को काम देखाउनको लागी बुझिन्छ ... मसँग निर्देशांकहरू छन् तर मलाई थाहा छैन कसरी यिनीहरूलाई गूगल अर्थमा ठ्याक्कै पत्ता लगाउन सकिन्छ ... निर्देशांकहरू यूटीएममा छन्… के तपाई मलाई बताउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईं युटिएम निर्देशांकहरूको लागि विशेष रूपमा हेरेर मार्ग मार्क गर्न सक्नुहुन्छ भने? ?…धन्यवाद!!!!
होलो अर्नेस्टो, Google धरतीको न्यूनतम आवश्यकता Windows 2000 हो, र जडान आवश्यक छ (कम से कम 128 केबीपीएस), कम्तिमा यसलाई स्थापना गर्न र अनलाइन डेटा डाउनलोड गर्नुहोस्।
कुनै जडान बिना, धेरै थोरै प्रयोग प्रदान गर्न सकिन्छ, किनकि सबैभन्दा मूल्यवान चीज भनेको जुन तपाईंको नजिक आउँदा वा टाढा जाँदा यो प्रदर्शन हुन्छ ... र यो मात्र जडान गर्न सकिन्छ।
तपाई यसलाई यहाँ बाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ:
कृपया मलाई बताउनुहोस् कि कसरी Google धरती पार्क को काम गर्न को लागी डाउनलोड या कन्फिगर को बिना काम इंटरनेट को जोड दिए र यदि win98 को लागि एक संस्करण हो
सञ्चार / सहभागिता: नगरपालिकाहरूको लागि सेवा